Mbido » Book » Paleo Sweets Paleo Desserts Book Recipe Book
Kedu ihe ị na-eme mgbe ị na-amaghị otú e si eme ihe nzacha nke na-esote atụmatụ nri nri Paleo? Ịkwesịrị inwe ezigbo nri ịkụziri nri na-enweghị nri ma ọ bụ na ịchọrọ ịchọta ihe oriri na-atọ ụtọ. Enweghị otu n'ime ihe ndị a, ịgbaso ihe oriri na-edozi ahụ ga-esi nnọọ ike.
Ọ bụrụ na ị nọ na-achọ ọhụrụ Paleo dessert Ezi ntụziaka, anyị nwere oké ozi ọma maka gị. Enyi anyị bụ Kelsey Ale na-enye ya akwụkwọ ntụziaka maka nri maka nri maka ndị 500 mbụ. Akwụkwọ nri akwukwo nri nke Paleo nwere ihe ntanetiri ihe ndi na-eri nri nke Paleo na uto di egwu. Ị nwere ike ijide akwụkwọ akwụkwọ zuru oke maka onwe gị taa kpam kpam! Naanị ị ga-akwụ ụgwọ maka mbupu.
Kelsey Ale na-enyefe akwụkwọ nri Ntụziaka Paleo maka FREE maka obere oge nanị iji nyere aka gbasaa okwu gbasara atụmatụ nri nri ọhụrụ ya. Akwụkwọ a bụ akwụkwọ n'efu (ọ bụghị akwụkwọ dijitalụ) naanị ị ga-akwụ obere ego maka mbupu na njikwa. Pịa ebe a iji nweta akwụkwọ gị! Biko rịba ama: Azụmahịa akwụkwọ a na-enweghị ihe ọ bụla dị mma mgbe ọ na-enye ihe ikpeazụ.